Ungayithola Kanjani i-PR | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 30, 2013 NgoLwesibili, Okthoba 29, 2013 Douglas Karr
Uma usaqala ubudlelwano bomphakathi, qiniseka ukuthi uhlola konke Umhlahlandlela ku-PR nguBrownstein & Egusa. Futhi ukuthola eminye imininingwane ngamasu we-PR, qiniseka ukuthi ufunda okuthunyelwe kwezivakashi - Iseluleko se-PR esivela kumbhali wangaphambili we-VentureBeat - kusuka kuConrad Egusa kubhulogi elihle likaScott Monty. Sibonga ngokukhethekile ku UMarty Thompson ukuthola!
Ukube bengizofaka noma yini, bekungaba yisinyathelo ndawo phakathi kuka-3 no-4 uma empeleni chaza iphimbo lakho. Nginabamele abaningi be-PR engibabiza ngegama lokuqala… futhi omunye ungumbhali kubhulogi yethu ngemvume yokwabelana nganoma yiluphi ulwazi alufisayo. Isizathu singenxa yokuthi umbhali uyihlonipha ngokuphelele inhloso yebhulogi yethu futhi akaze ayisebenzise kabi. Ukuba ne-pitch emnandi, eyenziwe ngezifiso kubalulekile!
Tags: Umhlahlandlela wabaqalayo ku-prbrownstein egusaumhlahlandlela ku-prprcindezela ukukhishwaezimayelana Nomphakathi
Okthoba 31, 2013 ngo-12: 57 AM
Sawubona Douglas, bengifuna ukusho okuningi, ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngomthombo we-PR engiwudalile. Ngicela ungazise njalo uma kukhona okudingayo.
Kubafundi beMarketTechBlog, ngiyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo ngokuthunyelwe esigabeni sokuphawula lapha.